I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguCasa
Ukwazi phambi kokubhukisha:
Ekufikeni kwakho uya kucelwa ukuba uhlawule ezi ndleko zilandelayo:
-Ukucoca kunye neenkonzo zokuhlamba iimpahla: 120 €
-Irhafu yabakhenkethi: 1 € umntu ngamnye ngosuku
-Ukufudumala, xa kuyimfuneko: i-15 € ngosuku
- Ukungena kade (emva kwe-7 pm): 20 €
I-Casa Elena yindlu ethandekayo epholileyo kakhulu, ehlala eSan Felice del Benaco, imizuzu emi-5 ukusuka kwiziko lembali kunye nemizuzu emi-5 ngemoto ukusuka elunxwemeni, izibuko apho unokufikelela kwinkonzo yesikhephe, ekhokelela kuzo zonke iindawo zaseLake Garda. kunye nemizuzu eli-10 ngemoto ukusuka eSalò: idolophu enomtsalane enechibi elimangalisayo, apho unokufumana khona iindawo zokutyela, imivalo kunye neevenkile.
Indawo yokuhlala, yohlulwe kwimigangatho emibini ibandakanya: ukungena kwigumbi lokuhlala, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela elineshawari, igadi ephindwe kabini enetafile yangaphandle kunye negumbi lokuphumla elangeni. Kumgangatho wokuqala, ufikeleleke ngokunyuka izitebhisi okanye ngesitulo sombane, sinokufumana: igumbi lokulala eliphindwe kabini, lixhotyiswe ngamanethiwekhi amathambo ahamba ngemoto kunye negumbi lokulala eliphindwe kabini elinebalcony, igumbi lokuhlambela elineshawa. Indawo yokuhlala, kumgangatho wokuqala, ine-air conditioning.
Iyafumaneka kwiindwendwe zethu, igaraji ephindwe kabini
Ifulethi elimangalisayo lilungele iintsapho, kodwa nakwabo bafuna ukonwabela umtsalane wechibi lethu ekuphumleni ngokupheleleyo.
Iyafumaneka kwiindwendwe zethu, ibhedi enamacala abantwana ukuya kutsho kwiminyaka emi-3
Yintoni onokuyibona eSan Felice
San Felice-idolophu endala.
Ilali yaseSan Felice, eyiSan Felice Scovolo yakudala, igcina kwiziko lembali iintsalela zeNqaba yamandulo, iRotingo Palace, eyakhiwa ngenkulungwane yeshumi elinesixhenxe, ngoku isisihlalo seHolo yeDolophu.
Ukuhamba embindini kusenza sifumane iMonte di Pietà di San Felice eyayisakuba yiMonte di Pietà di San Felice, isakhiwo esihle esinesitayile saseVenetian, esinearcade eneentsika ezisikwere zamatye e-ashlar.
Ngaphakathi ibinguRhulumente weSixeko, namhlanje umsebenzi welizwe ujike ngokugqibeleleyo kuKhenketho, likomkhulu leOfisi yoLwazi kunye neHolo yeMiboniso ebamba imiboniso emininzi yamagcisa ala maxesha.
San Felice-Santuario del Carmine
IBandla laseBaroque Parish, elinikezelwe kwiMartyrs SS. I-Felice, i-Adauto kunye noFlavia, ibekwe kanye kumbindi welali kwaye iqulethe imisebenzi yobugcisa obuxabisekileyo kuquka ne-Altarpiece yase-Romanino, kuba kufanelekile ukuyindwendwela. Ngaphandle nje kweziko lembali laseSan Felice del Benaco kumi iSanctuary yeMadonna del Carmine, icawa yakudala yaseRoma eyakhiwa ngo-1460 kwaye iqhutywa ziiCarmelite Friars.